फोर्ड ‘भ्यालु फर मनी’ गाडी... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
नेपालको अटोमोवाइल्स बजारलाई पनि लकडाउनले निकै असर पारेको छ। त्यसैले आफ्नो बजार उस्कान अटोमोवाइल्स व्यवसायीहरुले ग्राहकलाई गाडी खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न रणनिति अपनाइरहेका छन्। फोर्डको लागि नेपालको आधिकारिक वितरक जिओ अटोमोवाइल्सले पनि विभिन्न योजना ल्याएको छ।
लकडाउनको कारण अटोमोवाइल्स क्षेत्रमा परेको असर, कम्पनीको भावी योजना लगायतको विषयमा हामीले जिओ अटोमोवाइल्सका म्यानेजिङ डाइरेक्टर आकाश गोल्छासगँ कुरा गरेका छौँ-
-लकडाउन केही मात्रामा खुकुलो भएपछि फोर्डले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि कस्तो अफर ल्याएको छ?
करिव ३ महिनाको लकडाउन पछि बजार केही खुलेको छ र ग्राहकहरू थोरै मात्रामा आइरहनु भएको छ। हाम्रो गाडी २०२० को बिएस ६ भएकोले हामी धेरै अफर दिन त नमिल्ने हो।
हाम्रो गाडीमा धेरै फिचर छ। सबैभन्दा ठुलो एड्भेन्टेज नै त्यही हो। त्यति हुदाँ हुदैँ पनि अरु सबैले अफर ल्याएको भएर हामीले पनि अफर ल्याएका छाैँ। हाम्रो अफर मूख्य त २०२० मोडलको गाडी किन्न सजिलो होस भनेर सजिलो फाइनान्स, ३० प्रतिशत मात्र डाउन पेमेन्ट, न्यूनतम व्याजदर र क्यास डिस्काउन्ट योजनाहरु ल्याएकमा छाैँ।
-नेपालस्थित अन्य अटोमोबाइल कम्पनीका डिलरहरुले पनि नयाँ नयाँ र आकर्षक अफर ल्याएका छन यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सबै कम्पनीहरुले आफुले सक्ने अफरहरु ल्याएका छन्। अरुको अफर पनि राम्रै छ, हाम्रो अफर पनि अरुकोसगँ प्रतिश्पर्धी गर्ने खालको नै छ।
-नयाँ अफर ल्याएपछि ग्राहकको मनसाय के कस्तो पाउनुभएको छ?
नयाँ अफर आइसकेपछि ग्राहकहरुको सोधपुछ राम्रो बढेको छ।ग्राहकलाई योजनाको बारेमा बुझाई सकेपछि ति सोधपुछ गर्नेहरुमध्ये अधिकांशले गाडी किन्नु हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।
लकडाउन दशैँसम्म पनि सहज हुने देखिदैँन । सबैभन्दा गाडी तपाईँहरु नाडा अटो शोमा बेच्नु हुन्थ्यो गाडी बेच्ने तपाईँहरुको आगामी रणनीति के छ ?
नाडा अटो शोमा हामीले धेरै गाडी बुकिङ लिन्थ्यौँ त्यो सत्य हो तर नाडामा किन धेरै बिक्थ्यो भने ग्राहकले अटो शो हुनुभन्दा १ महिना अघिदेखि गाडी किन्दैन थिए। ग्राहकहरु नाडाको अफर कुरेर बस्नुहुन्थ्यो।
यस पटक अटो शो नभएपनि दशै तिहारमा समय हेरेर विभिन्न कम्पनीहरुले अफर निकाल्ने नै छन् र ग्राहकहरुलाई एकै छानामुनि गएर गाडी हेरेर छानेजस्तो सजिलो त नहोला तर अनलाईनबाट वा शोरुम भिजिट गरेर निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यस्तै यो पाली नाडा अटो शो नभएर मात्र सेल्स घट्ने होइन। हाल देशको आर्थिक स्थितीको कारण ग्राहकको आम्दानी घटेको छ, तलब पाइरहेकाहरुको तलब घटेको छ त्यस्तै कम्पनीहरुले वितरण गर्ने गाडीको संख्या पनि घटाएको छ यसले गर्दा मूख्य असर पर्ने हो।
-नेपाली बजारमा इको स्पोर्टसले राम्रो बजार लियो ? अहिले त्यस्को अवस्था के छ ?
इको स्पोर्टस नेपालमा सार्वजनिक हुदाँ यसको कुनै प्रतिश्पर्धी थिएन त्यसैले त्यो राम्रो बिकेको थियो। त्यसपछि प्रतिश्पर्धीहरु पनि आए उनीहरुले पनि राम्रो सेल्स गरे। तर पनि इको स्पोर्टसको सेल्स धेरै घटेको छैन। कसैले हामीले भन्दा धेरै बेचे होला कसैले थोरै बेचे होला इको स्पोर्टस पहिले जत्तिकै बिकिरहेको छ। बरु सेडानहरु सेग्मेन्टका गाडीहरु एसयुभीमा अएको हुनाले यो सेग्मेन्टनै ठुलो भएको छ। २०१३ पछि २०१७ मा अपग्रेट भयो त्यसपछि पनि समय समयमा गाडीमा जुन अपग्रेट भएको छ त्यसले गर्दा आज पनि यो गाडी राम्रो छ।
-लकडाउनमा पनि नयाँ गाडी मगाइरहनु भएको छ कि, अथवा अव नेपालमा तपाईँहरुले ल्याउन लागेको गाडी कुन छ?
कोभिडले गर्दा कम्पनीले आफ्नो प्लान पछाडी सारेको छ। त्यसकारण तत्कालै यो वर्ष फोर्डको नयाँ गाडी आउदैन। नेपालमा फोर्डको नयाँ गाडी २०२१ मा ३ ओटा अलग – अलग एसयुभी आउदैँ छ।
-सरकारले इलेक्टिक गाडीमा कर बढाएको छ यसबारे तपाईँहरुको धारणा के छ?
सरकारले केही सोचेरै कर बढाएको होला। यो समयमा सरकारलाई करको पनि आवश्यकता थियो। तर कर अल्लि बढी मात्रामा बढाइयो जसले गर्दा विभिन्न विद्युतिय सवारी साधनमा डिलरहरु, नयाँ इलेक्ट्रिक ब्राण्ड लन्च गर्ने मनस्थितीमा रहेका व्यवसायीहरुलाई अहिले समस्या भएको छ। सरकारले थोरै थोरै गरेर बढाउनु पथ्र्यो, एकैपटकमा धेरै बढ्दा बजारले त्यसलाई एसेप्ट गर्दैन र त्यो सेग्मेन्ट नै बन्द हुन जान्छ।
-र अन्त्यमा फोर्ड कै गाडी किन्न किन्ने ? अरु पनि गाडी बजारमा छन?
पहिलो विशेषता त फोर्ड सबै भन्दा ‘भ्यालु फर मनी’ गाडी हो। जुन मूल्यमा हाम्रो गाडीमा फिचर्सहरु पाइन्छ अरु गाडीमा पाइदैँन।
त्यस्तै हाम्रो गाडीमा मेन्टेनेन्स शुल्क निकै न्यून छ। पहिलो त वर्षमा एक पटक मात्र, वा १० हजार किलोमिटरमा सर्भिसिङ गर्दा हुन्छ, दोस्रो हाम्रो सर्भिसिङ मूल्य ६ हजार छ त्यो त मोटरसाइकल बराबर हो। त्यस्तै फोर्डको स्पेयर पार्टसको मूल्य पनि निकै सस्तो छ।
फोर्डको रिसेल भ्यालु अहिले राम्रो मध्यमा पर्छ र अन्त्यमा हामी ग्राहकप्रति बफादार छौ। कसैलाई केही समस्या पर्यो भने पुरा टिम र्नै लागेर उहाँको समस्या सुल्झाउछौं।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार १८, २०७७, १०:२६:००